Saturday January 16, 2021 - 21:29:03 in Wararka by Super Admin
Luuley Cismaan Xasan waa hooyo danyar ah oo ku nool xaafadda Ansalooti ee degmada Xamarjajab. Hooyo Luuley waxay dhashay 14 carruur ah, balse waxaa hadda ka nool hal wiil kaliya. Wiilkeeda Xasan Cali Ibraahim oo ku magacdheer Xasan Eelaay wuxuu 2015
Luuley Cismaan Xasan waa hooyo danyar ah oo ku nool xaafadda Ansalooti ee degmada Xamarjajab. Hooyo Luuley waxay dhashay 14 carruur ah, balse waxaa hadda ka nool hal wiil kaliya. Wiilkeeda Xasan Cali Ibraahim oo ku magacdheer Xasan Eelaay wuxuu 2015 ku biiray ciidanka dowladda. Markii uu mushaar la'aan noqday 8 bil oo xiriir ah ayuu iibsaday qoray AK47 ah oo ay dowladdu siisay, si uu ugu noolaado. Sababtaas ayaana loo xiray bishii Maarso ee 2017, wuxuuna xabsi ku jiraa sanadkii 4aad. Ilaa iyo maantana caddaalad ma helin oo maxkamad lama soo taagin.
Aan codka hooyo Luuley gaarsiinno cid kasta oo wax u qaban karto.
Qore : Xuseen Sabriye.